polyester အပ်ချုပ် Thread, ဇာပန်းထည်အထည်အလိပ်, ဘက်လိုက်မှုတိပ်, ဇစ်
အခုတော့ MH မှာ 4,000 န်ထမ်းထက်ပိုမိုပိုင်ဆိုင်
အိမ်နှင့်ပြည်ပမှာ,5ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် 40
6 နှင့်အတူနိုင်ငံခြားအကိုင်းအခက်, 100,000 စက်ရုံတွေ
ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာ၏စတုရန်းမီတာ, 1 ဂိုဒေါင်
သိုလှောင်မှုပမာဏဧရိယာ၏ 12,000 စတုရန်းမီတာနှင့်အတူ။
တိုင်းဖောက်သည်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်အကြောင်းပြချက်စာရေးဘို့ MH ထံမှမဝယ်။ ယုံကြည်ကိုးစားပါ: ဒါပေမယ့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါကတစ်ခုတည်းစကားလုံးမှဆင်း distills ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကကိုးစား။ | ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုးစား။ | ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုကိုးစား။ ဆက်ဖတ်ရန်...
ကျနော်တို့ MH အဖွဲ့ join ဖို့အနည်းငယ်ကောင်းသောလူများအတွက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ သင်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသို့မဟုတ်ပွဲစားအေးဂျင့်ဖြစ်ပါသလား နောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံး လူမှုရေး stream
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 17 2018 02: 21
MH,akingdom of garment accessories. Now you can not only buy garment accessories from us, such as thread, ribbon and tape, zipper, button, lace, fabric... BUT tailoring materials. Check the following link and find what you need indeed: https://www.mh-chine.com/
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 10 2018 01: 21
နောက်ဆုံးရဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူသတ္တုခလုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှာပိုပြီးဒီဇိုင်းများ Check: https://www.mh-chine.com/buttons/metal-button
NingbomhOfficial ရဲ့ post ကိုမှဓာတ်ပုံများ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 02 မေလ 2018 21: 04
Canton တရားမျှတသော Booth အတွက် MH မျှ .: 14.4 A12-16, B07-11
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 02 မေလ 2018 00: 50
Canton တရားမျှတသော Booth အတွက် MH ထိုပြည်၌သင်တို့သည်တွေ့ဆုံမျှော်ရှာနေမျှ .: 14.4 A12-16, B07-11 ။
Canton တရားမျှတသောအတွက် MH
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 02 မေလ 2018 00: 49
တနင်္လာနေ့, 30 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018 06: 02
2018 ၏ယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာတော့ MH အောက်ပါကုန်သွယ်မှုဝိုင်းသို့တက်ရောက်ရန်သွား: 1.Household ကုန်စည်ပြပွဲ Expocentre ပြပွဲစင်တာ, မော်စကို, ရုရှား 2018-09-11 - 2018-09-13 2.Texworld ပဲရစ်ပဲရစ်, ပြင်သစ် 2018 -09-17 - 2018-09-20 3.Textileexpo အားလုံး-ရုရှားကပြပွဲစင်တာ, မော်စကို, ရုရှား 2018-09-18 - 2018-09-21 4.Fast ချည်မျှင် Expo XXI Warsaw ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Expocentre, ဝါဆော, ပိုလန် 2018-11- 22 - 2018-11-24 ထိုပြည်၌သင်တို့သည်တွေ့ဆုံမျှော်ရှာနေ!
သောကြာနေ့, 27 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018 06: 28
အထည်ချုပ်သို့မဟုတ်အလှဆင်သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးဘို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စ, သင်ကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစုဆောင်းခြင်းမှသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီသောတဦးတည်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ elastic ကြိုး, စစကြိုး, သတ္တုကြိုး, uu ကြိုး, ဖယောင်းကြိုး, Bobby အလွန်သေးငယ်သောကြိုး, လိမ်ကြိုး ....... နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များများအတွက်အောက်ပါ link ကို click နှိပ်ပြီးမှတှနျ့ဆုတျမပွုပါရှိသည်: https://www.mh-chine.com/ropes
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 25 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018 01: 48
MH သတ္တု Thread ကမ္ဘာ့ဖလား MH မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်အပ်ချုပ်, ပန်းနှင့်အလှဆင်ဘို့ M / က MS / MHS / MH / MX အမျိုးအစားသတ္တုမျှင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အောက်ပါ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါရှိပါတယ်: https://www.mh-chine.com/threads/metallic-yarns
သောကြာနေ့, 20 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018 01: 49
MH ဇစ်ကမ္ဘာ့ဖလားကျနော်တို့နိုင်လွန်ဇစ်, ဗဓေလသစ်ဇစ်, သတ္တုဇစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းလျှောထောင်ပေါင်းများစွာ၏တူသောဇစ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ထက်ပို $ 10 သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဘို့ငါတို့ဇစ်အမျိုးအစားသွားရောက်လည်ပတ်: https://www.mh-chine.com/zippers
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 18 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018 06: 28
"1 ဖို့" 8 /4စတိုင်: နှစ်ချက်မျက်နှာနှင့် Single မျက်နှာ polyester / နိုင်လွန်ဖဲ Ribbon အကျယ်လူပျိုမျက်နှာနှင့်နှစ်ဆရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်စံနမူနာ: Solid, ပုံနှိပ်, ရွှေ Edge, အစင်းအရောင်: 192 အရောင်များနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအရောင် Fast အဖြစ်အရောင်ကဒ်: >4တန်း MOQ: 20,000yds https://www.mh-chine.com/ribbon-tape/ribbon/satin-ribbon
2018 ၏ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း MH အောက်ပါကုန်သွယ်မှုဝိုင်းသို့တက်ရောက်ရန်သွား:
ကွမ်ကျိုး, တရုတ်အတွက် 123rd Canton တရားမျှတသော။
အဆင့် III ကို: 1st မေလ ---- 5th မေလ, 2018 Booth အမှတ် 14.4 A12-16, B07-11 ချည်မျှင်ပစ္စည်းတရားမျှတသော Complex ။
Texworld ပဲရစ် Add: ပဲရစ်, ပြင်သစ်, 2018-09-17 - 2018-09-20
အိမ်သူအိမ်သားကုန်စည်ပြပွဲ Add: Expocentre ပြပွဲစင်တာ, မော်စကို, ရုရှား 2018-09-11 - 2018-09-13
အမှတ်တံဆိပ်, အရသာ, စတိုင်, ဖက်ရှင်နှင့် style.are လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်ထဲမှာ MH အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် MH အမှတ်တံဆိပ်ရှည်လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောဇွဲနထေိုငျ၏တန်ဖိုး။
Home Home ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား --Threads --Zippers --Ribbon & တိပ် --Ropes --Laces --Buttons --Interlining တစ်ခုကိုချုံ့ခြင်း --Tassel & မြိတ် / --Tailoring ပစ္စည်းများ --Garments & ဆက်စပ်ပစ္စည်း --Sewing စက် & အစိတ်အပိုင်းများ --Fabric --Others ကြှနျုပျတို့အကွောငျး --MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် --MH စက်မှုဇုန် --- Thread စက်ရုံများ --- ဖဲကြိုး & တိပ်စက်ရုံများ --- ဇာစက်ရုံများ ကျွန်တော်တို့ကိုရှေးခယျြ --Why --MH သမိုင်း --Trade ရှိုးများ --Image Galleries --Video အယ်လ်ဘမ် MH ယဉ်ကျေးမှု --Core တန်ဖိုးများ --MH အိပ်မက်များ --Social တာဝန်ယူမှု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ --Office တည်နေရာ --Factory တည်နေရာ --Shop တည်နေရာ --Feedback အဝန်း --ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ --News